Madaxweynaha Soomaaliland oo Puntland ka dalbaday in ay Maxaabiis is-dhaafsadaan – Kalfadhi
Madaxweynaha Maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa Maamulka Soomaaliland ka dalbaday in ay nabadda kawada shaqeeyaan labada dhinac islamarkaana ay wadahal ku dhameeyaan khilaafka degaanka salka ku haayo ee muddada dheer u dhaxeeya.
Isagoo xalay khudbad ka jeediyay munaasabad loogu dabaal-dagayay 18-ka May oo ku beegan 28 sano Guuradii ka soo wareegatay markii ay ku dhawaaqayn gooni isu taagooda ayuu sheegay in Soomaaliland ay dooneyso in ay nabad kuwada noolaadaan dalalka dariska ah iyo gobalka oo dhan.
Si-gaar ah Muuse Biixi Cabdi, waxa uu khudbadiisa doorka ku saaray gooni isu taagga Soomaaliland iyo muranka kala dhaxeeya Soomaaliya. “28 sano kadib waxaa la joogaa markii ay Soomaaliland aqoonsi heli lahayd waxaana aduunyada ka codsaneynaa Ictiraaf” ayuu yiri Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
“Waxaan rabnaa inaa nabad kuwada nolaano Soomaaliya oo aan kawada shaqayno nabadda gobalka iyo wax isla qabsi” ayuu yiri Madaxweynaha maamulka Soomaaliland. “Si gaar ah Puntland waxaan ka dalbaneynaa in ay wadahadal nagala gasho khilaafka naga dhaxeeyo” ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi oo xalay ka hadlay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland.
“Waxaan hortiina ka ballan qaadayaa in aan sii deyn doono maxaabiista aan Puntland uga qabsanay Tukaraq, dhinacoodana waxaan ka codsaneynaa in ay soo daayaan hadii ay jiraan Maxaabiis” ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha Soomaaliland. “Ma jirto sabab loo sii haayo maxaabiista waana in aan sii deynaa” ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi.